Sida loo doorto kormeeraha naqshadeynta garaafyada | Hal-abuurka khadka tooska ah
Sida loo doorto kormeeraha naqshadeynta garaafyada
Encarni Arcoya | | Design Graphic
Markaad naftaada u hurto naqshadaynta garaafyada, waxaad ogtahay in mar dhow ama hadhowba aad u qoondayn doonto qayb ka mid ah lacagta aad hesho si aad u maalgashato. Tani waxay noqon kartaa iibsashada barnaamijyada tafatirka sawirka ama qalabka (computer, keyboard, tablet...). Laakin ma taqaanaa sida loo doorto kormeeraha naqshadeynta garaafyada?
Dhab ahaantii waxaa jira dhinacyo muhiim ah oo ay tahay inaadan dayacin inaad doorato waxa ugu fiican adiga oo ku saleysan shaqadaada iyo baahiyahaaga. Waxan oo dhan hoos ayaan uga hadlaynaa.
1 Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka kormeerayaasha ee naqshadeynta garaafyada
1.1 naqshadeynta kormeerka
1.2 tayo aad u badan
1.3 Waqtiga jawaabta
2 Waxa ay tahay inaad raadiso markaad dooranayso kormeeraha naqshadaynta garaafyada
2.1 cabbirka kormeerka
2.2 Xalka shaashadda
2.3 Qiyaasta saamiga
2.5 Cawlan iyo midabyo
Faa'iidooyinka iyo khasaarooyinka kormeerayaasha ee naqshadeynta garaafyada
Lahaanshaha kormeeraha naqshadaynta garaafyada, lafteeda, waa faa'iido weyn. Waana sababta oo ah waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo dhammaan shuruudaha laga yaabo in xirfadle u baahan karo si uu u guto shaqadooda. Laakiin marka laga reebo faa'iidooyinka ay bixiso, waxaa sidoo kale jira faa'iidooyin badan oo ay tahay in la tixgeliyo.
Taladayadu waa in aad miisaanto wanaagga iyo xumaanta kormeeraha leh sifooyinkan si aad u ogaato inay mudan tahay iyo in kale.
Dhibaatooyinka aad ka heli doonto waxaa ka mid ah:
Waxaan ka hadleynaa habka loo qaabeeyey kormeeraha. Mararka qaarkood, fiirinta dhinaca jireed ma aha tan ugu fiican, laakiin sifooyinka farsamada gudaha. Ha ka baqin inaad haysato kormeere fool xun, ka dib oo dhan, taasi maahan waxa kaa caawin doona inaad qabato shaqadaada, laakiin sifooyinkeeda.
tayo aad u badan
Ka waran haddii kuwa ku hadla, ka waran haddii dekedaha USB, ka waran haddii TV tuner... Runtii ma u malaynaysaa in aad u baahan tahay oo dhan in?
Mararka qaarkood waxaas oo dhan waxay dhaawacaan kormeeraha naqshadeynta garaafka. Tag kuwa fudud, iyo, dhammaan ka sarreeya, si aad u buuxiso shuruudaha ugu yar si aad u doorato kormeeraha shaqadan.
Mid ka mid ah sifooyinka ay isku dayaan inay naga iibiyaan marka aan rabno inaan iibsano kormeeraha naqshadeynta garaafyada waa waqtiga jawaabta. Waxay kuu sheegi karaan inay aad u dhakhso badan tahay, in aanay qaadan waqti dheer... Laakiin, miyay taasi muhiim u tahay naqshadaynta garaafyada? Ma badna.
Waqtiga jawaabta waxa loola jeedaa inta ay qaadanayso in wax lagu soo bandhigo shaashadda. Tusaale ahaan, haddii aad weydiisato inuu socodsiiyo barnaamij oo ay qaadato waqti ka badan ama ka yar si loo muujiyo.
Sida iska cad, kuuma sheegayno inaad dooranayso mid wakhti dheer qaadanaysa, laakiin looma baahna inay leedahay xawaare xad dhaaf ah (maxaa yeelay waxa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto kiiska ciyaaraha).
Ma kula tahay in kormeeraha ugu fiican ee naqshadaynta garaafyada uu yahay kan ugu qaalisan? Waa laga fogaan waayay runta. Waa run inay jiraan kuwo aad qaali u ah, laakiin maaha inay ka fiicnaadaan kuwa aad ka heli karto meel dhexe ama hoose.
Xaaladdan oo kale, waa in aad xukunto adiga oo mudnaanta siinaya walxaha aad ugu baahan tahay, sidaas darteed, iibso kormeere ku siinaya walxahaas tayada sare leh halka kuwa kalena ay ku sii jiraan heer la aqbali karo.
Waxa ay tahay inaad raadiso markaad dooranayso kormeeraha naqshadaynta garaafyada
Haddii aad ka fekereyso inaad doorato kormeeraha naqshadeynta garaafyada, halkan waxaan ku wadaageynaa furayaasha si aad doorashadaada ugu guuleysato intii suurtagal ah. Macnaheedu maaha inaad haysato dhammaan tayada ugu wanaagsan, maadaama aad u kala hormarin doonto shaqada aad qabato.
Qaar ayaa sheegaya in ay tahay mid aad u weyn. Qaar kale, si kastaba ha ahaatee, waxay u maleynayaan inaysan sidaas muhiim ahayn. Laakiin runtu waxay tahay inaan u tixgelinno inay muhiim tahay. Waxaad arkaysaa, markaad la shaqeyneyso sawirro qaraar sare leh, kuwaas oo leh faahfaahin badan, lahaanshaha wanaagsan, kormeeraha weyn ayaa aad uga fiican mid yar.
Sida iska cad, wax walba waxay ku xirnaan doonaan booska aad ku leedahay miiska, shaqada ama xafiiskaaga. Laakiin sida caadiga ah marka kormeerayaashu ay yihiin cabbir caadi ah, ugu dambeyntii waxaad ku dhameyneysaa laba ama saddex si aad u hesho booska lagama maarmaanka ah.
Maxayse noqon karaan kuwaa? Isku day inaad ka dhigto kormeeraha ugu yaraan 29 inji oo ku dhawaad ​​ka sii wanaagsan oo ka sarreeya labajibbaaran (taas oo ah, leydi ah) sababtoo ah, inkasta oo aad u maleyneyso inay dheereyso naqshadeynta, runta ayaa ah inay u muuqato mid aad u fiican.
Dabcan, waa inaad tixgelisaa dhinacyo kale oo muhiim ah.
Sababtoo ah inaad haysato kormeere weyn macnaheedu maaha inaad leedahay xallin weyn. Mararka qaarkood waa mid ka mid ah khaladaadka adiga kugu jira.
Xaaladdaada, naqshadeeye garaaf ahaan, waxaad u baahan doontaa kormeeraha si uu kuu tuso sawirro fiiqan oo daacad u ah xaqiiqada intii suurtagal ah. Inkasta oo midabku uu sidoo kale soo galo halkaas, awoodda xallinta ee shaashadda ayaa aad muhiim u ah.
Midkee ugu fiican? Annaga waa inaad haysataa ugu yaraan 2560 × 1440 pixels. Ka sarreeya taas ayaa xitaa ka sii fiican.
Hadda, waa inaad hubisaa in barnaamijyada aad isticmaashid ay u diyaarsan yihiin xallinta sababtoo ah haddii kale, aakhirka waxaad ku bixin doontaa wax badan oo aadan awoodin inaad isticmaasho.
Dhammaan kuwan kor ku xusan, saamiga dhinaceedku waa inuu la sameeyaa cabbirka kormeeraha. Caadi ahaan waxaan ognahay 4: 3, oo u eg afargeesle, kuwaas oo ah kormeerayaasha caadiga ah (iyo kuwii ugu horreeyay ee soo baxay). Hadda, waxa kale oo jira 16:9, kaas oo ka sii leydi ah oo bixisa dherer isku mid ah laakiin waa ilaa hal iyo badh shaashado labajibbaaran.
Ugu dambeyntiina, kuwa ugu casrisan waa 21: 9, kuwaas oo aad u ballaaran oo u eg laba shaashadood oo labajibbaaran oo isku xiran. Waxay ku siinayaan aragti badan waxayna kuu oggolaanayaan inaad u qaybiso shaashadda hadba baahida aad qabto.
Tani waa arrin aad muhiim u ah oo ay tahay inaad fiiro gaar ah u yeelato saddexda erey: TN, VA iyo IPS.
TN waa kan ugu caansan, laakiin waa inaad ogaataa in, naqshadeynta garaafyada, ay tahay tan ugu xun. Waxayna sababtu tahay inaysan ku tusin midabada sida ay dhab ahaantii yihiin. Sidoo kale, waxay leedahay xaglo daawasho oo aad u xun.
VA waa tallaabo ka socota TN. Xaaladdan oo kale waxaad haysataa waqtiyo jawaab celin oo wanaagsan (ka fiican TN iyo IPS) iyo midabyo fiiqan, in kasta oo aysan weli ahayn kuwo macquul ah.
IPS waa waxa aad ka heli doonto dhexda iyo heerka sare. Waa kan ugu qaalisan, laakiin midabadu waa aamin. Dabcan, waxay leedahay waqtiyo jawaab celin hoose oo mararka qaarkood waxay bixisaa qulqulo iftiin ah (laakiin waxaa lagu xalliyaa in laga shaqeeyo meelo iftiin leh).
Cawlan iyo midabyo
Sida aan kuu sheegnay, aad bay muhiim u tahay in midabada ugu aaminka badan lagu muujiyo kormeeraha. Sidaa darteed, kuwa ugu fiican waa IPS sababtoo ah waxay daboolayaan sRGB ama Adobe RGB midabka midabka. Kuwa kale, sida VA, ma xuma, sababtoo ah waxay ku dhow yihiin aamin, laakiin TNs ayaa ah kuwa ugu xun.
Hadda ma kuu caddahay sida loo doorto kormeeraha naqshadaynta garaafyada?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Sida loo doorto kormeeraha naqshadeynta garaafyada
Sida loo doorto farta cinwaannada
burushka Procreate ugu fiican